Iimuvi ezi-8 Malunga nababhali bamaXesha onke kunye neeNdidi | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, Ababhali, I fantasy, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli emnyama, Imibongo
Ekuvukeni kwenkulumbuso kwinyanga ephelileyo Tolkien, malunga nombhali we INkosi yamasongo, namhlanje ndikhetha enye Iimuvi ezi-8 malunga nababhali. Ngokucacileyo zininzi ngakumbi, kodwa emva kovavanyo ndithathe isigqibo kwezi. Ngokuqinisekileyo wonke umntu unezakhe, ewe, okanye ezinye ezikhethwayo. Okwangoku ezi zihloko zimalunga UDickens, ULorca, UAusten, oodade Amagama omnxeba we Charonte, HC AndersenIgama lokuqala Agatha lithetha ntoni? Christie y Shakespeare.
2 Umfazi ongabonakaliyo - Umfazi ongabonakaliyo
3 Andersen entle
4 UShakespeare othandweni
5 Lorca, ukufa imbongi
6 UJane Austen oselula
7 Oodade baseBrontë
Iinkwenkwezi UNicholas Hoult, Waziwa ngokuba ngu Irhamncwa kwiifilimu zamva nje malunga nesizukulwana sokuqala se- X-amadoda. Kwaye ubale impembelelo yokuba Ndidlule kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala zombhali kunye nabahlobo bakhe basekholejini. Inyani leyo kunye nobudlelwane nabo babuphawula ukudalwa kolo Manyano lweRingi kwaye ezo hlabathi kunye neelwimi ezikhokelele kwimpumelelo yelizwe ukuba yintoni i mhlawumbi i-trilogy yencwadi edumileyo yeMbali.
Umfazi ongabonakaliyo - Umfazi ongabonakaliyo
Zininzi iifilimu malunga noCharles Dickens, eyona yakutshanje ibingayo yi. Kwaye masingatsho ngeenoveli zakhe, ezinikezela ngamanqaku ambalwa. Kodwa ngenxa yezizathu zeprosaic, funda Ukuzinikela kwam kuRalph Fiennes, namhlanje ndihlala nalo undalathisile kwaye ndangena ngaphakathi 2013.
Isekwe kwi Inoveli kaClaire Tomalin, Umbhali waseNgilani kunye nentatheli eyaziwayo ngebhayografi yakhe yababhali abaphambili abafana noDickens okhankanywe ngasentla, uThomas Hardy okanye uJane Austen. Uxelela indlela, ekuphakameni komsebenzi wakhe, uDickens, utshatile kunye neminyaka engama-46 ubudala, udibana nentombazana encinci ye-18 eba yeyakho umthandi wemfihlo kwada kwasekufeni kwakhe.
Mhlawumbi ngaphezulu kuye inkumbulo yobuntwana Kuya kufuneka ndibhekise kumgangatho wayo okanye ukufaneleka kwayo. Kodwa oku Ingoma yomculo ka-1952 malunga nobomi be umbhali odumileyo waseDenmark wamabali abantwana Enye yezintandokazi zam. Kukho iinguqulelo zamva nje, kodwa le yahlala entliziyweni yam nangenxa yohlobo, oluhlekisayo kunye nomfanekiso wobugcisa awenzileyo UDanny Kaye.
Waziwa kakuhle, ophumelele ii-Oscars ezininzi, phakathi kwabo yeyona bhanyabhanya ibalaseleyo, kunye nenye Fiennes phakathi ... ayinamsebenzi nokuba ingaphezulu okanye incinci iyangena kwinyani, ihlala inee-nooks ezininzi kunye neekrannies kunye neemfihlakalo zebard yesiNgesi edume kakhulu ngalo lonke ixesha. Kwaye ayinamsebenzi ukuba ikhokelela kumdlalo wokuhlekisa wokungaqondani ngumbhali wayo. Ngaba Inguqulelo ka-1998 sele ehleli Ngaphezulu Uninzi lwezinto ezenziweyo malunga naye.
Lorca, ukufa imbongi
Phakamisa isandla sakho ongayikhumbuliyo le nto uthotho lweTV malunga noFederico García Lorca. Kwaye zininzi. Uyalathise UJuan Antonio Bardem kwaye yaqala ukuboniswa ekupheleni kwe 1987. Inyanzelwe Iziqendu ezili-6 kwaye inokubonwa kwakhona nanini na xa ufuna kwi-RTVE's A la Carta. Yadibanisa olona toliko lubalaseleyo lwesiSpanish, nangona yayinenkwenkwezi kuyo UNickolas ubabalo, Umlingisi obalaseleyo waseNgilani owayekhe wabonwa kwenye yezo ngqungquthela zimnandi zase-Bhritane zama-80s, Buyela kwi-Brideshead.
UJane Austen oselula
De 2007. Ikhokelwe ngu UJulian Jarrold kunye neenkwenkwezi U-Anne Hathaway, uJames McAvoy, UJulie Walters okanye uJames Cromwell phakathi kwabanye. Ngenxa ye bu bungqina wafunda kwi romance Umbhali odumileyo wama-Victoriya kunye negqwetha eliselula uTom Lefroy, ifilimu yaliphinda eli bali ukuba liphengulule iziseko zothando lwemisebenzi yabo.
Iinoveli zoodade baseCharlotte zinamawaka kunye nohlobo olunye kumdlalo bhanyabhanya, kodwa kubo njengabalinganiswa abaphambili baninzi abambalwa. Uninzi lwamva luvela kwi-2016, kodwa ndincamathele kolu luqikelelo lwenziweyo EFransi en 1979. Yeluswa nguwe UAndré Téchiné, ineenkwenkwezi U-Isabelle Huppert, u-Isabelle Adjani kunye noMarie-France uPisier. Kwaye wenza uphononongo oluzolileyo lobomi baba dade bathathu babalaseleyo kuncwadi lwehlabathi.
Kwaye ndigqibezela enye imovie ye 1979 otyikitya ngokudlala amanqaku amabini anzima e-cinema njenge UDustin Hoffman kunye noVanessa Redgrave. Umzimba wokugqibela u-Agatha Christie noHoffman yintatheli yaseMelika emphandayo ukunyamalala okumangalisayo e 1926.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Iimuvi ezi-8 Malunga nababhali bamaXesha onke kunye neeNdidi
I-Biography kunye nemisebenzi ka-Ernesto Sabato